Gonzalo Calvo waa farshaxaniste reer Madrid ah oo abuura Origamiskan quruxda badan | Abuurista khadka tooska ah
Mashaariic kale badiyaa waxay qaataan waqti ka badan intii aan moodeynay, laakiin badanaa waxay dhacdaa in badanaa lagu wareejiyo wax aan aad u xiiseynay oo aan leenahay hiwaayad ahaan oo aan dooneyno inaan kordhino si aan ugu bedelno hab lacag badan lagu dhigo akoonkeena bil kasta. Waxa kale oo dhacda in mashruucan beddelka ahi uu noqdo isha ugu weyn ee laga helo kheyraadka.
Gonzalo García Calvo waa muusikiiste ka socda Madrid oo leh xirfad weyn oo farshaxanimo oo loo yaqaan Origami iyo warqadkee ayaa ah alaabta ceyriinka ah ee lagu abuurayo sawiradaas quruxda badan iyo kuwa yar yar ee farshaxanistu naga farxisay. Waana in gacmaha Gonzalo Calvo, marka laga reebo inuu yahay qalabkiisa ugu muhiimsan ee xirfaddiisa muusigiste, sidoo kale waxay faa'iido u leeyihiin abuurista sawiradaas quruxda badan ee xoolaha ee aan ku arki karno qoraalkan.
Gonzalo badanaa wuxuu isticmaalaa warqad yar oo uu isagu ku abuuro qaybo si fiican u adag oo ay ka buuxdo qiimo weyn oo farshaxanimo. Xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu muujiyo inuusan u baahnayn waraaqo badan, sida ku dhacda qalfoofka T-Rex halkaasoo uu kaliya ugu baahnaa 21 8 × 8-centimeter laba jibbaaran oo wargeys ah, si loo abuuro mid kale oo ka mid ah kuwa Origami ee naga dhigaya kuwo ku qanacsan. bilicsanaanta bilicda iyo ganaaxa qaababka.
Runtii waa wax lagu farxo oo qofku awood u leeyahay u beddel warqad fidsan xayawaan saddex-geesood ah oo inna hor taagan oo leh muuqaal aad u macquul ah oo ay ka buuxaan faahfaahin yar.
Mid kasta oo ka mid ah qaybaha Gonzalo runti waa heer sare waxayna leeyihiin xoogaa qaabab gaar ah taas oo u oggolaanaysa inay ka sii muuqdaan jaleecada hore marka loo eego qofku marka uu marka hore la kulmo.
Khadadka waxqabadka mid kasta oo ka mid ah origami wuxuu awood u yeelan karaa inuu qaabeeyo muuqaal gaar ah oo uu calaamadeeyo astaamaha lagu garto ee xayawaanka uu sawiro. Waxaad haysataa Flickrkiisa inay sii wataan shaqadooda.
Waan kuu daayey adiga qaybo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Xayawaannada quruxda badan ee ku jira Origami ee Gonzalo Calvo
Caleemaha qalalan sida shiraalada sawiradaas quruxda badan